Ch 16 Luke – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Lioka / Ch 16 Luke
16:1 Ary izy koa dia nilaza tamin'ny mpianany: "Nisy lehilahy anankiray nanan-karena, ary izy nanana mpitandrina ny fananany ny toetrany. Ary izany lehilahy izany dia nampangaina ho azy ny dia dissipated ny fananany.
16:2 Ary nampaka azy izy ka nanao taminy: 'Inona izany reko momba anao? Omeo ny fitantarana ny fitantanan-draharaha. Fa afaka ny tsy ho mpitandrina ny fananany. '
16:3 Ary ilay mpitandrina ny fananana nanao anakampo hoe:: 'Inona ny tokony hataoko? Fa ny Tompo no maka ny fitandremana ny fananany hiala amiko. Tsy matanjaka aho ampy mihady. Loatra aho menatra ny mangataka.
16:4 Fantatro izay hataoko, mba, rehefa efa nesorina tao ny fitantanan-draharaha, mba hisy handray ahy ho ao an-tranony. '
16:5 Ary noho izany, miara-miantso ny tsirairay tamin'ny tompony izy meloka taminay, dia hoy izy tamin'ny voalohany, 'Ahoana be Tokony Homenao tompoko?'
16:6 Dia hoy izy:, 'Iray-jato siny ny diloilo.' Ary hoy izy taminy:, 'Raiso ny faktiora, ary haingana, mipetraha ka soraty dimam-polo. '
16:7 Manaraka, dia hoy izy tamin'ny anankiray koa, 'Raha ny marina, ohatrinona Tokony Homenao?'Ary hoy izy:, 'Iray injaton'ny famarana ny vary tritika. "Ary hoy izy taminy, 'Raiso ny boky firaketana an-tsoratra, ka soraty valopolo. '
16:8 Ary ny tompony nidera ilay mpitandrina ny fananana iniquitous, ao fa efa nanao zavatra hita ho hendry. Fa ny taranak'i tontolo izao dia manan-tsaina kokoa ny taranaka noho ny zanaky ny mazava.
16:9 Ary noho izany dia lazaiko aminareo, namana ho anao mampiasa iniquitous mamônan, amin'izay mba, rehefa ho efa lasa, mba horaisin'ireo ho any amin'ny trano rantsan-kazo mandrakizay.
16:10 Izay mahatoky amin-javatra madinika, koa mahatoky amin-javatra lehibe kokoa. Ary na iza na iza no tsy marina amin-javatra madinika, koa tsy marina amin-javatra lehibe kokoa.
16:11 Koa dia, Raha toa ka tsy mahatoky amin'ny iniquitous mamônan, iza no hatoky anareo amin'ny zava-marina?
16:12 Ary raha tsy mahatoky amin'ny zavatra an'i hafa, iza no hanome anareo ny anao?
16:13 Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa. Fa ho halany ary ny iray ho tia ny hafa, na dia hiraikitra ny iray, ary tsinontsinona ny hafa. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamôna ianareo. "
16:14 Fa ny Fariseo, izay tia, dia nihaino izany rehetra izany. Ary dia naneso azy.
16:15 Ary hoy Izy taminy:: "Ianareo no ireo izay mpanamarin-tena eo anatrehan'ny olona. Nefa Andriamanitra mahalala ny fonareo. Fa inona no nanandratra ny olona dia fahavetavetana eo imason 'Andriamanitra.
16:16 The law and the prophets were until John. Nanomboka tamin'izay, the kingdom of God is being evangelized, and everyone acts with violence toward it.
16:19 Ary nisy lehilahy anankiray nanan-karena, ary niakanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika. Ary feasted kanto dia kanto isan'andro.
16:20 Ary nisy mpangataka, atao hoe Lazarosy, izay nandry teo an-bavahady, Feno fery,
16:21 te mba ho feno ny hihinana izay latsaka avy tamin'ny latabatr'ilay mpanan-karena olona. Nefa tsy nisy nanome azy izany. Ary na dia ny alika kosa no avy ka nilelaka ny feriny.
16:22 Ary nony maty ilay malahelo, ary dia nentin'ny anjely ho any an-tratran'i Abrahama. Ary ny lehilahy mpanan-karena ihany koa ny maty, ary izy entombed any amin'ny helo.
16:23 Dia nanopy ny masony, raha mbola tao fijaliana, dia nahita an'i Abrahama teny lavitra eny, sy Lazarosy teo an-tratrany.
16:24 Ary niantso, hoy izy:: 'Ray Abraham, mamindrà fo amiko, ka iraho Lazarosy, ka iraho Lazarosy mba hanoboka ny tendron'ny rantsan-tanany amin'ny rano mba hamelombelona ny lelako. Fa izaho dia nampijaliana amin'ny afo izany. '
16:25 Ary hoy Abrahama taminy: 'Zanaka, hahatsiaro fa nahazo zavatra tsara eo amin'ny fiainanao, ary raha oharina, Lazarosy nahazo zava-dratsy. Fa ankehitriny izy no nampionona, ary marina tokoa ianareo hampijalina.
16:26 Ary ankoatra izany rehetra izany, eo anay sy ho anareo ny korontana lehibe efa niorina, ka dia ireo izay mety te-niampita avy eto aminareo dia tsy afaka, ary tsy mahatonga ny olona iray miampita avy any ho eto. '
16:27 Ary hoy izy:: 'Avy eo, ray, Mifona aminao aho, mba hanirahany azy ho any an-tranon'ny raiko, fa manana rahalahy dimy aho,
16:28 dia mba hilaza aminy, fandrao tonga izy ireo koa ho amin'ity tanàna ity ny fijaliana. '
16:29 Ary hoy Abrahama taminy: 'Manana an'i Mosesy sy ny mpaminany. Aoka izy hihaino azy ireo. '
16:30 Dia hoy izy:: 'Tsia, Ray Abraham. Fa raha misy olona dia tokony handeha ho any aminy tamin'ny maty, mibebaka izy ireo. '
16:31 Fa hoy izy taminy:: 'Raha tsy mihaino an'i Mosesy sy ny mpaminany, ary tsy hino na dia misy nananganany tamin'ny maty. ' "